နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ပင်လယ်ပြင်တွင် ခရီးသွားခြင်း စုံစီနဖါ
. January 21, 2009 at 11:58 PM
အစအဆုံးဖတ်အပြီး လက်ကောက်ကြီး ကြွားထားတဲ့ ပုံကိုပဲ မှတ်မိတော့တယ်..။ ;P ။ (လက်ကောက် ထင်တာပဲ..။)
khin oo may January 22, 2009 at 12:15 AM
စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ်. လူပုံတွေကုိတော့မျက်လုံးကလေး အသာမှိတ်ပြီးကြည့်သွားတယ်။ မူးလဲသွားမှာစိုးလို့။
လေယဉ်ပထမဆုံစီးတုံးက အိမ်သာကို ဘယ်လို ရေဆွဲချရမှန်းမသိလို့ချွေးပြန်ခဲ့ရတာ မှတ်မိသေးတယ်။
khin oo may January 22, 2009 at 12:17 AM
ပန်းနွယ် အဲဒါ လက်ကောက်မဟုတ်..ဘဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့လက်ဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။ ဘာစွမ်းသလဲဆိုတာတော့ကိုယ့်ဘာသာ ကြိတ်မေးပေတော့..သိရင် ဖုံးဆက်လိုက်ပါ။
ဇနိ January 22, 2009 at 12:32 AM
မီယာ January 22, 2009 at 3:07 AM
ဟားဟား ထုံ အကိုကြီး ပြန်လာပြီလား ၀မ်စွေ့ ၀မ်စွေ့ ၀မ့်ဝမ့်စွေ့
khin oo may January 22, 2009 at 6:17 AM
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်လဲ ဝေဝေဝါးဝါးဘဲ။ ဒီလောက်ရှင်းပြထားတာတောင်...။
(မီယာ ...သူကများသူများကိုပြောရတယ်ရှိသေးတယ်။ )
ksanchaung January 22, 2009 at 12:26 PM
တစ်လလုပ်၊ တစ်လနား ကမ်းလွန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ပြောနေကျစကား ပြန်သတိရလို့ပါ။ ပထမတစ်ပတ်၊ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ဒုတိယတစ်ပတ်၊ နည်းနည်းပျင်းလာပြီ။ တတိယတစ်ပတ်၊ အတော်ဂေါက်လာပြီ။ စတုတ္ထအပတ်၊ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ ကုန်းပေါ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ တွေ့သမျှ ရွာသူတွေတောင် အတော်လှနေတယ် ဆိုပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ သင်္ဘောသားတွေဆိုရင် ပိုဆိုးမလားပဲ။
:P January 22, 2009 at 1:35 PM
ဟိ.. နာက ချော့ပါဆိုတာ ဓါးကိုပြောတာမှတ်နေတာ....။
အောက်ဆုံးပုံကတော့ ဘိုးတော်လုပ်လို့ ရပြီ....။
ဒါပဲလား...၊ သွားတာအကြာကြီး၊ ပြန်ပြောပြတော့ အကျဉ်းချုပ်ကလေး....။
Ko Boyz January 22, 2009 at 3:08 PM
အီး...။ တစ်ညလုံး မအိပ်မနေ ကြိုးစားပြီး ပုံတွေ တင်.. လက်အညောင်းခံပြီး ပို့စ်တွေ ပေရှည်မသွားအောင် ရေးပေးတာကို အကျဉ်းချုပ် လာလုပ်နေသေးတယ်။ သူပြောတဲ့ ချော့ပါဓါးနဲ့ ခုတ်လိုက်ရ...။ ဟင့်...။
wildwildwind January 22, 2009 at 5:03 PM
ဒီ post ကရသစုံ ပါဒယ်
TZA January 22, 2009 at 8:19 PM
ဟားဟားဟား လို့ ယဉ်ယဉ်လေး ရီသွားပါတယ်၊
khin oo may January 22, 2009 at 10:20 PM
May Moe January 23, 2009 at 8:03 PM
khin oo may January 23, 2009 at 10:04 PM
ksanchaung January 24, 2009 at 5:24 PM
အန်တီ KOM ပေးတဲ့ Comment က အကောင်းဆုံးပဲ။ This post has been removed by the author. တဲ့။
May Moe January 25, 2009 at 11:32 PM
ကိုBOyz စီဘုံးဘယ်ပျောက် :)
Ko Boyz January 26, 2009 at 12:42 AM
မေမိုး စီပုံးအောက်ကို ရွှေ့ထားတယ် ။ ကျယ်ကျယ်မြင်ရအောင်လို့
ယောနသံစင်ရော် January 29, 2009 at 10:12 AM
ကိုBoyz...မပြုံးပဲ ဝါးလုံးကွဲရယ်မိပါတယ်.။ ကျေးဇူးပါပဲ ။
Ko Boyz January 29, 2009 at 11:28 AM
တန်တော့ ငုတ်စိလေးတွေကို နေမှာ...။
လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ကိုပေါ January 30, 2009 at 2:13 AM
ကိုဘွိုင်းဇ်.... Toilet က ရေဆွဲချတဲ့ ခလုပ်ကိုရော တွေ့ခဲ့ပါတယ်နော့။း-)
Ko Boyz January 30, 2009 at 2:15 AM
တွေ့ပါ့...။ ဖရိခ်ျထဲက ကုဒ်တော့ ကုန်အောင် သောက်လာခဲ့တယ်...။
khin oo may February 1, 2009 at 2:20 PM
အဲဒါ ကိုဘွိုင်းဇ်.မဟုတ်ပါ. အင်ကြီး.. ရေပိုက်လာပြင်တဲ့ အလုပ်သမား ကို ဆွဲခေါ်ပြီး ရိုက်ဒါးတာဘာ။ N2 ကို မေးကြည့်ပြီးပါပျီ။
MrDBA February 1, 2009 at 3:00 PM
khin oo may February 2, 2009 at 11:18 AM
khin oo may July 20, 2011 at 4:28 AM
Ko Boyz May 29, 2013 at 1:26 PM
ဘာတွေ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိတာလဲ အရီးကွန်...